Belgium Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(434 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Kubhejera muBelgium
Belgium ine nhoroondo yakapfuma kwazvo yekubuda uye kusimudzira kwekubhejera. Vanyori vezvakaitika kare vawana pano pekutanga zvinyorwa zvekutamba makadhi muEurope, ayo anodzokera kuma1300 mi kwemakore, uye muzana ramakore regumi neshanu muBelgium akabata rotari yekutanga.
Kubva 1999, bhizimusi rekubhejera muBelgium rinoonekwa serechokwadi, iri gore rino muna Chivabvu 7 wakadzikwa mutemo wakabvumidza kubata kubhejera munyika. Mumakore anotevera mutemo wakaburitswa zvimwe zvigadziriso, asi achiri hwaro hwepamutemo hwekubhejera muBelgium. Nhasi inodzora kubhejera zviitiko Kubhejera Commission, iyo yakavambwa mu1999. Mutumbi uyu unobata marezenisi, pamwe nekudzora mashandiro ecasino uye kuchengetedza kodzero dzevatambi.
Ruzivo rwevashanyi kune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori, muBelgium kune kurambidzwa kushanyira kasino vanhu vari pasi pemakore makumi maviri nerimwe, pamwe nenhengo dzematare nemapurisa. Iyo yekupedzisira inogona kushanyira kubhejera zvivakwa chete mune chiitiko chekuita kwavo mabasa.
Zvinoenderana nemutemo wekubhejera pamhepo muBelgium, kuitira kuti iyo kambani igone kupa masevhisi kubheja kwepamhepo munyika, inofanirwa zvakare kunge iri mhinduro yezvivakwa zvepasi rese zvekubhejera. Kubhejera Belgium Commission iri kuongorora zvakanyanya kuitwa kwemutemo uye inowanzo gadzira mazita evatema epasi rese epamhepo ekubhejera nzvimbo muBelgium, ichishanda munyika zvisiri pamutemo. Nekutyora mutemo vanoshanda vanotarisana nezvikwereti, huwandu hwayo hunogona kusvika kusvika zviuru zana zvemamiriyoni.
Rwendo rwedu rwunoenderera mberi, uye munzira iyo nyika iri CasinoToplists Gothic castles, zvinonaka waffles uye chokoreti - Belgium. Ngatione kuti ndezvipi zvinhu zvinonakidza zvakamirira vashanyi uye vanobhejera munyika.
Belgium - Mashoko mashoma nezve nhoroondo uye nenzvimbo nzvimbo;
Kasinasi-yakakonzerwa nenyika inobvumidzwa kubva ku1999;
vose vari munyika 9 casinos;
mitemo yakasimba uye kutungamirirwa kwehurumende;
21 makore emakore.
Nzvimbo shanu muBelgium Brussels dzine mazita edzimba;
Chokwadi chinofadza pamusoro penyika uye vagari vemo.
Nzvimbo yeBelgium uye nhepfenyuro yemamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu
Pakutanga kwenguva yedu munharaunda yemazuva ano yeBelgium madzinza eBelgic aigara, aive neCelt mavambo. Inobva pazita redzinza uye rinotangira zita renyika.
Panguva iyoyo, Belgium yaive chikamu cheumambo hweBurgundi, Roma, Spain, yaive chikamu cheNetherlands uye kunyangwe France.
Nguva yakasarudzika yenyika yaive Belgian Revolution yaGunyana 23, 1830 - Belgium yakazivisa hushe hwakazvimirira, ukuwo mutungamiriri achiva Mambo Leopold I. MuBelgium akatambura zvakanyanya ini neHondo Yenyika II - mazhinji eguta akapotsa aparadzwa zvachose, asi nezve kuderera kwehupfumi uye toti hapana maakaundi.
Iye zvino hurongwa hwezvematongerwo enyika hweBelgian ibumbiro remitemo reparamende. Musi wa21 / 07/2013, nyika inotongwa naMambo Philip. Nyika yakakamurwa kuita matunhu matatu (Flemish, Walloon neBrussels-Capital), ekutanga maviri ayo akapatsanurwa kuva matunhu nemamwe.
Casino uye kubhejera muBelgium
Gore rakadonhedzwa nzvimbo dzekubhejera dzeBelgian dzakatanga mu1999 - ndipo pakazogamuchirwa mitemo nekugadziriswa kwazviri, izvo zvichiri kudzora zviitiko zvemakasino nedzimba dzekubhejera. Yakazara muBelgium 9 makasino aripo: 1 iri muguta guru - Brussels, 4 uye makasino munzvimbo dzeFlemish neWalloon muOstend, Namur, Spa, Knokke-Heist, nezvimwe.
Yese kasino inoshanda pasi pezenisi uye ine garandi fund - ndiko kuti, iyo dhipoziti iyo kana chero chinhu chingaenda chero kuhwina mubhadharo kana rezinesi.
Enda kumakasinasi anogona chete vanhu vasvika pachinhanho chemakore makumi maviri nerimwe (vanoda pasipoti). Yese kasino inowana kadhi rayo pane vatambi uye inofanirwa kuchengetedza iyo data kwemakore gumi. Kune makasino nedzimba dzekubhejera hadzibvumirwe vamiriri vematare, mutongi, notariari nemapurisa. Kunze, chokwadi, vanhu ava kuita kwavo mabasa.
Zvakare kuiswa pa kasino kunogona kuvharwa pachinoshandiswa chiremba, muchengeti, hama yepedyo nekupihwa magwaro akakodzera anosimbisa kubhejera kuvimba kuda kutamba. Iye chete mutambi anogona kukumbira kuvharira kuwana kwako - zvinofanirwa kungozivisa iyo kasino.
Sezvaunenge wanyatsonzwisisa, muBelgium kubhejera zvose zvakanyanyisa uye zvakaenzana zvakajeka.
Mumuzinda wenyika - Brussels - kasino «Grand Casino Brussels Viage" Inotamba mitambo ye poker SIT & GO'S neMuvhuro neChitatu, nekutenga-ins kubva pamadhora makumi matanhatu, mutambo wemari hapana-muganho wekubata kana Omaha inoitwa zuva nezuva mukasino inoitirwa poker makwikwi WPT nhanho (... Nyika Poker Kuratidzwa) Kasino inopa hukuru hwakasarudzika yemachina - 60 michina ine mareti kubva pa375 cent kusvika 1 euros, blackjack, roulette, baccarat., Mahjong neMari Wheel Kune vanoda vatengi pane maVIP- horo dzine mhando yakasarudzika yemidzanga nemhando yepamusoro whiskeys.
miziyamu doro (Belgische Brouwers). Tsamba: Grand-Place, 10. Pano, vanoda doro rekubika doro vachakwanisa kuona kuratidzwa kwezana ramakore rechi 18, uye zvakare kudzidza zvakawanda nezve kubikwa kwazvino vachishandisa tekinoroji yemultimedia. Kupinda kumuseum kunodhura € 5.
Museum "Autoworld» (Autoworld). Kero: Parc du Cinquantenaire, 11. Pano, pasi peimwe denga, miziyamu ine anopfuura mazana mana emamodeli emota: mazambiringa, mitambo, nyeredzi dzemotokari, mota dzezvakatipoteredza, mota dzemasipareti nemidhudhudhu. Tikiti yevakuru - € 400, vana (kubva pamatanhatu kusvika pamakore gumi nemaviri) - € 9, pazasi - yemahara.
Chiratidzo cheBrussels monument 'Atomium'. Kero: Avenue de l'Atomium, 1020.Pedyo neheizel metro chiteshi. Iyi monument is a crystal lattice yeatomu yedare, mukukudziridzwa ka160 bhiriyoni nguva. Kureba kwemamita 102, uye huremu hunenge matani mazana maviri nemazana mana. Iko kuvaka kunoshamisa!
Paki "Mini-Europe". Nzvimbo: padyo neshongwe "Atomium". Iyo paki ine nzvimbo dzakanakisa kwazvo muEurope, dzakaitwa pachiyero che1 kusvika 25. Pakazara, pakaratidza maguta makumi masere uye zvinhu mazana matatu nemakumi matatu. Inonyanya kufarirwa, hongu, Big Ben, iyo Eiffel Tower uye Leaning tower nemigwagwa yeVenetian.
Comic Museum. Kero : Belian Comic Strip Center 20 rue des Sables (Zandstraat). Vanyengeri veComic vachanakidzwa neratidziro yemuseum, iyo inosanganisira anopfuura 25,000 anoshanda kubva kune "ane ndebvu" zhinji kusvika nhasi. Nenzira, anogara muBelgium nhamba hombe yevanyori vemabhuku enyambo.
Chokwadi chinofadza pamusoro peBelgium neveBelgium
Iyo musha kune vanhu vanopfuura mamirioni gumi - vazhinji vevatorwa;
Nyika inoburitsa anodarika mazana masere emhando dzedoro, uye pagore mugari wese wenyika ino anonwa anenge malita zana nemakumi mashanu. Pano chete inogadzira matani mazana maviri ezviuru echokoreti mazana maviri nemakumi maviri - iri 800 kg pamunhu. Vatenzi veBelgium vanouya nemhando ye "praline";
Bhodhoro diki redoro - 0.25 litita, uyezve - 0.33 litita, uye mabhodhoro eanoratidzika kunge akaenzana vhoriyamu e0.5 haatombowana.
MuFlanders, taura zvakanyanya muchiDutch uye muWallonia muchiFrench. Mune ino kesi, iyo Flemings inotonhorera chaizvo valontsam;
VaBelgium vane hunhu uye vanorarama pane imwe nguva - kungo zadza kushanya mushure memafaro iwe haungakwanise kubudirira;
Belgium - nyika inotungamira mumunda wekucheka madhaimani;
93% yemhuri ine imba chero ipi zvayo;
Vazhinji veBelgium vanosarudza kudya kunze kwemisha uye mumaresitorendi nemakamuri;
Chimiro chakakurumbira che "Manneken Pis" panguva yemitambo nemhemberero vakapfeka masutu, ese akagadzirwa nezve mazana matanhatu;
NeSvondo, hapana munhu pano haashande - kunyangwe iyo pharmacy;
Pano yakave yakagadzirwa saxophone, mafuta okupenda uye mavheti emabhanzi.
Belgium pamepu yeEurope
0.1 Pa-kubheja muBelgium
3 Kubhejera muBelgium
3.0.1 Nzvimbo yeBelgium uye nhepfenyuro yemamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu
3.1 Casino uye kubhejera muBelgium
3.1.1 Zvikepe zveBrussels
3.1.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peBelgium neveBelgium
3.1.3 Belgium pamepu yeEurope
inotonhorera katsi kasino